Naizvozvo Level 27 anotanga tisingafungiri zvakakwana, kunyange zvishoma 'Matrix’ pamwe yakaturikwa zvinogumbura. Kune vashoma batsira ruvhevhe uye mazano nokuda kuwana kuburikidza Danho rino yakarurama nhamba anonunurwa dzinovaraidza uye rakanaka nhamba yenyeredzi kuti vene!
Chekutanga zvakanaka zvayo zvose kuziva kuti dzinovaraidza chete burukai rimwe panguva, dont dzingaidza kuedza kuunza pasi zvakare mhiri weboard kana dzinovaraidza yako chavasina, zvinongoreva wont basa. Kana dzinovaraidza wako ari pickle wekuedza uye vanobatana inoperera akapoteredza kana vanonanga kuti vamwe combos makuru uye kushandisa firecracker!
Shandisa Balloons dzako zvakachenjera! Kune rimwe Balloons shoma zvikuru mavara kukandwa ringa muchikepe ichi uye vanogona kuva batsira chaizvo. Kuzvishandisa yakajeka inoperera pazasi yako dzinovaraidza kana kuti kubatana kukwira pemahombekombe chete chitsvuku zvinogumbura. Chinhu bedzi nani pane kushandisa chimwe chibharuma kuti zvimwe combos guru ndiko kushandisa miviri (mavara akasiyana …pachena!)
Yakaturikwa zvinogumbura munhu?
Yeuka izvi pamwero ine vashoma unotii, 60 chokwadi uye une 8 dzinovaraidza kurwira saizvozvo kuchengeta 'dilly dally’ kushoma, kutarisira bhizimisi kutanga, uyu mutambo kwete vanomuda!
Firecrackers sezvo nguva dzose muri shamwari dzako, kana iwe mari mumwe kushandiswa nayo kuuya pasi inovaraidza, kwete pfungwa zvikuru pakuponesa kana kuti 'zuva kuchinaya’ achava pamusoro pako usati unoziva!
Vavarira kubvisa zvose rimwe ruvara kuti zvibodzwa chikuru pfungwa, Balloons vari batsira asi dzisinei kuita izvi. Scoring nyeredzi matatu inonaka asi yeuka chokutanga wako kununura murombo vaduku dzinovaraidza! Just kushanda rimwe Mbiru panguva ugozova ichi kuitwa pasina nguva. Kana uine zvimwe runoita zvasara izvi kuchaita kuti mamakisi ako kana unogona kuisa dzinovaraidza ako ipapo basa iri scoring dzimwe pfungwa. Rambai imi maziso kuzarura kuti multiplier kutigumbura! vanogona Panoita mutsauko kuti mamakisi ako kunyanya kana iwe vanobatanidza vamwe pamwe!
Kubvisa zvose asi mumwe ruvara anogona kuita kuti zvimwe zvikuru pfungwa scoring!